निरन्तर क्रान्ति र संघर्ष नै जीवन हो « Sajhapath.com
निरन्तर क्रान्ति र संघर्ष नै जीवन हो
यहाँ क्रान्ति भन्ने बित्तिकै गोलाबारुद र ध्वंस हो भन्ने बुझ्ने लाल-बुझक्कडहरुको कमी छैन !
सफलताको साधक नै संघर्ष हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ !
हरेक प्रकारका सामाजिक अभियन्ता र सर्जक नै क्रान्तिकारी र योद्धा हुन् !
मागेर वा रोएर पाएको सफलतालाई संघर्ष भन्न कदापि सकिँदैन !
नत त्यसलाई क्रान्ति नै मान्न सकिन्छ !
उत्साह, हिम्मत, सहास, आँट र धैर्यका साथ संघर्ष गरेर पाएको सफलताले नै जीवनलाई सार्थक तुल्याउन सक्छ !
असारे हिलोसँगको संघर्ष पछि मंसिरमा झुल्ने धानका बालाले किसानको जीवनलाई आनन्दित तुल्याउँदछ !
कठोर संघर्ष र मिहिनेतपश्चात् परीक्षामा प्राप्त उत्कृष्ट नतिजाले विद्यार्थीलाई खुसी तुल्याउँदछ !
ह्रदयभित्र उर्लेका भावनालाई गहकिला शब्दमा पोखेर सिर्जना गर्ने सर्जकलाई आफ्ना कृतिको आकृति ग्रहण गर्दा प्रशन्नता भए जस्तै, संघर्ष एउटा त्यस्तो पुँजी हो जसले संघर्ष गर्ने व्यक्तिमात्र होइन त्यो व्यक्ति बस्ने समाज, छरछिमेक, समुदाय, राज्य आदि सबैले त्यस्ता सफलताको स्वाद चाख्न पाउँदछन् !
संघर्ष र क्रान्ति भन्नेबित्तिकै तर्सिने र अनर्थ बुझ्नेहरु जीवनमा जहिले पनि पछि पर्छन् र तिनीहरूलाई सफलता मिराज सावित हुनेछन् अनि सपनामा पनि साथ दिँदैनन् !
क्रान्तिको शाब्दिक अर्थ उर्जा र संघर्षको शाब्दिक अर्थ कोसिस भन्ने हुन्छ ! टक्कर, विद्रोह, घर्षण, युद्धलाई संघर्ष शब्दका यी अर्थले संघर्षको भयावह चित्र मानवसमक्ष उभ्याउँछन् ! जसरी ढुङ्गा र माटोसँगको टक्कर र बिद्रोहबिना न त खेतीमा धान उब्जिन्छ न त उब्जनी नै बढ्छ ! त्यसरी नै लोहारको आरन र सुनारको चोटबिना न त त्यसले आकार दिन्छ न त सुन्दरता नै दिन्छ ।
जीवन अर्थात् जीवनीसँग गाँसिन आउने अनेकन संघर्ष शब्दले निरन्तर सक्रियता तथा कठोर परिश्रम नै जीवन हो भन्ने अर्थ बुझाउँदछ । यसर्थ क्रान्ति नै श्रेय अनि संघर्ष नै जीवन हो भन्ने बुझाउँछ ।
मानव जीवनलाई चिरिच्याट्ट पारेर सजाउन समुन्नत र विकसित बनाउन कठोर परिश्रम र सक्रियतारूपी युद्ध स्वच्छ विद्रोह वा स्वच्छ प्रतिस्पर्धारूपी लडाई वा अभियान आवश्यक पर्दछ !
मानव जातिले कुनै पनि उच्च पद, महान्, उपलब्धि एवं विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न यदि अनवरत् रूपमा परिश्रम गरिरहन्छ भने त्यसलाई नै वास्तविक रूपमा क्रान्ति वा संघर्ष भन्न सकिन्छ । किनभने सभ्यताको मिर्मिरेदेखि वर्तमानसम्म मानिसले जे-जति उपलब्धि हासिल गरेका छन् त्यो निरन्तर परिश्रम र सक्रियतारूपी कठोर संघर्षको प्रतिफल हो । सम्पूर्ण उन्नति र विकासबीचको तत्व नै क्रान्ति र संघर्ष हो ।
सम्पूर्ण प्रगति र अभ्यूत्थानको रहस्य नै संघर्ष हो । त्यसैले जीवनलाई सुखी, सम्पन्न वैभवशाली बनाउने कारक तत्व भनौं वा सारतत्व भनेकै संघर्ष हो । त्यसैले निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ, संघर्ष नै जीवन हो । संघर्ष नै सफलता हो । संघर्ष नै जीवनको आधार हो । यही आधारमा टेकेर मानिसले आफ्नो गत्नव्य तय गर्दछन् ।